जडीबुटी निर्यात - मूल्याङ्कन अनलाइन
भदौ २९, बागलुङ । बागलुङ जिल्लाबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २० प्रजातिका जडीबुटीको कारोबार भएको छ ।
साधारण च्याउ, सतुवा, वन लसुन, चिराइतो, नागबेली, पाखनवेद, अतिसलगायत जडीबुटीको कारोबार भएको हो । २५ हजार ४९० किलो जडीबुटीबाट रु. २ लाख ७५ हजार राजश्व संकलन भएको छ ।
सबैभन्दा बढी ६७ हजार ३९० किलो सल्लाको खोटोको कारोबार भएको सहायक वन अधिकृत रामबहादुर विकले जानकारी दिए । ७ वटा सामुदायिक वनमा भएको खोटो संकलनबाट उपभोक्ता समूहले रु. ८ लाख ९० हजार आम्दानी गरेका छन् । खोटो संकलन र त्यसको कारोबारबाट रु. १ लाख २७ हजार राजश्व संकलन भएको विकले बताए ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समिति करबापत रु. ३६ हजार प्राप्त भएको छ । जिविसले खोटोमा प्रतिकिलो ५० पैसाका दरले कर लगाउने गरेको छ । खोटोको कारोबारको लागि रुपन्देहीको माउन्ट रोजिन, कपिलवस्तुको कपिलवस्तु रोजिन र सुनसरीको हिमाली रोजिन एण्ड टर्पेण्टाइन कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ । ती कम्पनीले आव २०६७/६८ देखि जिल्लामा खोटो संकलन गर्दै आएका छन् । जिल्लामा ९० प्रजातिका जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावर सूचीकृत छन् ।
“संकलन र प्रशोधन अभावमा बहुमूल्य जडीबुटी त्यसै खेर गइरहेका छन्,,” विकले भने “यहाँको जंगलमा जडीबुटी प्रशस्त छ, अनुसन्धान, पहिचान र संकलन हुन सकेको छैन ।” उपयुक्त सीप, उपकरण र प्रशोधन केन्द्रको अभावमा जडीबुटीको बजारीकरण हुन सकेको छैन ।
आव २०७२/७३ मा १२ प्रजातिका ११ हजार ८७९ किलो जडीबुटीको कारोबार हुँदा रु. १ लाख २८ हजार राजश्व संकलन भएको थियो । इजाजत पत्र लिएपछि वन कार्यालयले संकलनका लागि १ महिनाको अवधि दिने गरेको छ । जडीबुटी खेती कार्यक्रमअन्तर्गत वन कार्यालयले टिमुर, सुगन्धवाल, अमृसो, लौठसल्ला रोपण गर्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य, कृषि No Comments » Print this News
« सगरमाथा चढ्दा अब अनलाइन चिकित्सकको सहयोग ! (Previous News)
(Next News) काँग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने : प्रम देउवा »
बालीमा अत्यधिक विषादीको प्रयोगका कारण गम्भीर समस्या देखिँदै
आयुर्वेद र नेपालमा हर्बल उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता